Kuvshinnikov Oleg Aleksandrovich - umbusi Vologda esifundeni - ziya ziba mandla iyaduma hhayi kuphela kulesi sifundazwe kodwa kulo lonke lelo zwe. Wayefanele kuholele esifundeni esikhathini esibucayi ezezimali nezomnotho futhi imiphumela emihle abonakala Leso naleso sakhamuzi County.
Biography Kuvshinnikova Oleg Alexandrovich
Indawo yokuzalwa ombusi esizayo - emzini Cherepovets, ngonyaka lokuzalwa - 1965. Ngemva kokuphothula esikoleni esiphakeme, wabhalisa ekolishi sov.torgovli e Yaroslavl, lapho ephothula nge-honours ngo-1991.
Isifundo saqhubeka Petersburg yezokuhwebelana kanye Economic Institute, ngemva kwalokho ngo-1994 Kuvshinnikov Oleg Aleksandrovich owaba umfundi we-Moscow State University of Management (hlelo "Production Management").
Ngaphambi 2002, wafunda lesi sifundo njengengxenye uhlelo ezinkampani yoqeqesho abaphathi 100 phezulu.
Ngaphambi 2005, wafunda i zeMasters kwezamabhizinisi abaphathi (Uhulumeni Academy of National Umnotho).
Kusukela 1982 Kuvshinnikov Oleg Aleksandrovich waqala ukusebenza phezu ukukhiqizwa umakhenikha esitolo ukulungisa imishini coke ngesikhathi Cherepovets Metallurgical Plant.
Ngo-1985 yena ngabuthelwa ebuthweni laseSoviet. Wakhonza ukuxhumana Ibutho eKemerovo. Battalion kwaba unobhala wekomiti Komsomol, abakhulu imishini zokuxhumana.
Kusukela 1987, wabuyela Cherepovets Steel Mill Rolling Mill ugingqe-isigayo ekamu, "250", okuyinto wahamba phezu wonke amazinga zokukhula ukukhiqizwa.
Ngo-1994, wayeseboshwe wasebenza njengoba induna ezikulesi simila elendlalekile, ngemuva kokuthi laba yinhloko ekamu, "250" namaphini induna umnyango senqubo yokukhiqiza. Ngo-2000 wamiswa njengephayona elivamile abakhulu esigabeni ugingqe esitolo, futhi kusukela ngo-February 2002 - isikhundla abakhulu inombolo ugingqe isitshalo 1.
Ngo 2002-2006. Kuvshinnikov Oleg Aleksandrovich wangena Cherepovets Idolobha Duma wakhonza njengombonisi usihlalo walo myalo, Veda ezisemadolobheni.
Ngo-December 2003, wahlanganyela "United Russia" - Iqembu lezombusazwe i-Russian.
C 2004 kuya 2005 wayeyilungu eBhodini Labaqondisi of "Severstal".
Ngo-January 2004, Kuvshinnikov Oleg Aleksandrovich, isithombe okuyinto kwakungeyona into engavamile e emakhasini emaphephandabeni endawo, waqokwa umqondisi we eziyinkimbinkimbi Social zokuhlala "Severstal".
Iposi bekatsatsa kuze shintsho Novemba 2006 ukuze sephini Ikhanda lokuqala Cherepovets. Ngokushesha, waba esebenza imeya yedolobha, futhi ngo-March 2007, anamanci mathandathu anamihlanu angu amavoti wakhethwa imeya Cherepovets.
Ngemva kwenyanga wahlala ngesikhathi KaHulumeni ye Political oPhethe "United Russia" (I-Ofisi yesiGodi Vologda).
Ngo-December 2011, Kuvshinnikov Oleg Aleksandrovich umbusi we Vologda esifundeni. Ngokusho isimemezelo laMengameli 17.05.2014, kulo ngu kokwesula post yakhe, futhi kwaba. obakhathalelayo. umbusi Regional ngaphambi ukhetho ezifanele.
14.09.2014 Vologda Oblast Governor abavoti wakhetha Kuvshinnikova, simenze cishe 63 amaphesenti wamavoti.
Ngo-2009, umbusi wesikhathi esizayo Kuvshinnikov Oleg Aleksandrovich ubekade ayibekele Izisebenzi, ukusekelwa phezu by owayengumongameli waseRussia. Wayekhona lokuqala ayikhulu esiqiwini.
Umhlangano no-uMongameli Russian Putinym V.
Isinqumo uMongameli Russia mayelana nokwamukelwa Kuvshinnikova umhlalaphansi ngo-2014, kwenza kwaba nomfutho omkhulu ngemva komhlangano we Putin kanye nenqubomgomo Vologda 05/15/2014 ngo Sochi "Bocharov Creek" (yokuhlala omongameli eyaziwa).
Kuvshinnikov esashiwo ikhanda zesicelo isimo sika ukuya okhethweni ekuseni. ukwesula Putin bokuqala sivunyiwe, ngaphambi umkhankaso wokhetho we-Vologda Region Governor Kuvshinnikova wacelwa ukuba akhonze njengephayona isahluko lesifunda.
Putin, kwathiwa wagcizelela ukuthi emkhakheni akufanele ukuhlela kuphela okhethweni ekuseni fair futhi uhlanganyele kuyo, kodwa futhi beveza kohlelo sokuthuthukiswa esifundeni.
Ukukhuluma 16 Meyi ngesikhathi isithangami nabezindaba izizathu ukuthi samenta ucele ukwesula nenjongo ukubamba iqhaza umshado nisebancane emkhankasweni wokhetho, Kuvshinnikov uthe yathatha lesi sinyathelo ukuze banethuba yangempela ukuqalisa amaphrojekthi kuhlelwe on ukuthuthukiswa kwezenhlalo nezomnotho esifundazweni Vologda ngokusekelwa egcwele lesifunda izakhamizi.
Ngokusho kwakhe, isikhathi esifushane, ngesikhathi ekuqaleni kwazo yasendle, futhi uhulumeni wesifunda zonke izinyathelo ukuthi kukhona izindleko olinganiselayo futhi izimali izinto isabelomali, wayeka ekukhuleni lesifunda izikweletu kahulumeni Benziwe.
Izitatimende khona kulesi sithangami
Kuvshinnikov khona kulesi sithangami, kwaboniswa ukuthi ekupheleni inkathi, lapho lusetshenziswa elawula izinyathelo anti-Inkinga, isigaba esisha ukuqaliswa eside izinhlelo zamasu umnotho uholwa imikhakha eyahlukahlukene, ukudala endaweni ngayinye ngokuya ekukhuleni kwayo, samuntu nemisebenzi emikhulu utshalomali embonini ugodo, igesi kanye nezimboni zamakhemikhali.
Konke lokhu kufanele kancane kancane kuholele ukwanda ngokugcwalisa isabelomali kusukela eziqoqwayo ku inzuzo phezulu 2020 in inani ruble 5-10 bhiliyoni.
Ngokuba ukuthuthukiswa isabelomali kufanele kuhambisane kwemvume izinkinga esifundeni.
Sasungula abasha wokuvelela Kuvshinnikova ithimba has a plan esicacile i ngempumelelo, imigomo ecacile, okuyinto kuhlelwe ukuba kufinyelelwe in the izinkathi ngokushesha futhi yesikhathi eside.
Kungenxa yalezi zizathu Kuvshinnikov wanquma ukuya ku ukuthatha umhlalaphansi, ukuze uqhubeke ukubamba iqhaza Septhemba ukhetho gubernatorial. Yena amathemba kakhulu ukuze asekele Vologda futhi uthi kwenzeka amkhethile kokuthunyelwe yokuba inhloko esifundeni uzoqala ukusebenza nge kokubheduka entsha ngokomzwelo.
Kusukela ukukhululwa pre-ukhetho Kuvshinnikov wenqaba.
Kuvshinnikov Oleg Aleksandrovich: Izibuyekezo
George Shevtsov, Usihlalo Regional lomthetho Assembly of the Vologda esifundeni, kusho ukuthi Kuvshinnikov bokutholwa umbusi iqoqo izinyathelo ngempumelelo lwenteke iphuzu wangempela uhlelo anti-Inkinga, uhulumeni uhlulekile ukumisa ukwanda yesifunda izikweletu kahulumeni.
Kuwo lo nyaka, izimali federal ukuba kwakhiwe umgwaqo, ukuthuthukiswa kwezolimo, njengoba sesimanje imithi, Izindawo abahlali izindlu ezindala futhi agugile babe uhileleke umthamo isamba ruble kuze kube eziyizinkulungwane ezingu-20.
Mayelana izinyathelo ezithathwe nguhulumeni 15 izifunda lesifunda wakwazi ukuphuma ebugqileni ezixhaswe uhulumeni. ukusebenza ngempumelelo kwezinhlelo zokuxhasa izinyathelo ngoba ukuqaliswa kwe-May isimemezelo kamongameli wakuvumela ukuba kuzuzwe imiphumela ephawulekayo omuhle emsebenzini kahulumeni.
Ukubika imiphumela ukusebenza umbusi ngo-2013 sivunyiwe yiphini we Assembly Legislative.
Uphenyo senators kusukela Vologda esifundeni
Senator Vologda Oblast Yuriem Vorobevym uhulumeni banikeza ukuhlolwa omuhle.
Ngokusho kwakhe, inhloko esifundeni osekwenziwe eziningi. nomzamo wangempela ke wathatha ukwenza isabelomali lesifunda elilungile kakhulu, okuyinto wavumela "Sula" Kuvshinnikova amaphrojekthi kwezomnotho esinzulu nezinhlelo zokusiza umphakathi.
sentfutfuko ye Vologda esifundeni kungenzeka kuphela ngokusekelwa elinomusa kuso sonke isibalo sabantu futhi ingxenye yayo ezimatasa.
Bonke abahlali kumele kucace ukuthi imiphumela esizayo okungase lekumele azuzwe ngemva ukuzuzwa yesikhathi esifushane neyezinto imigomo amasu sokuthuthukiswa esifundeni. Ngasinye kumele kube sobala ukuthi yendima yayo ekuqhubeleni ukuqaliswa imisebenzi kuhlelwe.
Senator Tikhomirov likhuluma Kuvshinnikova kahle. Yena okholwa ukuthi nakuba esikhathini yomsebenzi wakhe wawela phezu zikhathi ezinzima, umbusi wakwazi ngokushesha futhi ngendlela efanele ukuhlola isimo somnotho, ukusungula ubudlelwano ibhizinisi zezinkonzo sikahulumeni.
Kwenziwe umsebenzi odinga isineke ngempela ukulungiselela futhi zamukele luhlelo lwekutfutfukisa lesifunda kuze kufinyelele 2020.
UMbhishobhi Omkhulu Vologda futhi Velikoustyuzhaninskomu Maximilian yamjabulisa ukuthi ekuqaleni kwazo emkhakheni wazibonakalisa umphathi abaphendula ngokunengqondo. Ngokusho kwakhe, izakhamuzi zesifunda abasisekelayo futhi ubonise isimo sengqondo esihle ezindabeni umholi lesifunda.
Ngu Igor Stepanov, Usihlalo Regional Public Chamber, nokuhlolwa futhi iza ngendlela enhle. Reception Kuvshinnikova Oleg Alexandrovich, ngokuvumelana Stepanov, livulekele izivakashi njalo. Ubizwa umuntu bathembekile futhi baqotho, amandla akhe spoilt.
nentshisekelo project yakhe esihloko sithi "UMbusi Team" kakhulu. uhlelo Kahle kungase kutholakale ngokudala imikhandlu yomphakathi ngaphansi esiphezulu. Komphakathi Yemfihlo Kuvshinnikov njalo avunywe kuqala.
Kuvshinnikov Oleg Aleksandrovich: umndeni, ukwenza izinto zokuchitha isizungu, izithakazelo, imali
Kusukela ebuntwaneni Kuvshinnikov asebenzayo kwezemidlalo. Waya Cherepovets Izingane kanye Youth Ezemidlalo School of-Olympic Reserve. Yena - nembangi inkosi ezemidlalo ice hockey. Namanje abanesifiso lo mdlalo.
Ngesikhathi sakhe sokuphumula futhi ngamaholide, uyabathanda ukugibela ekwehleni futhi cross skiing yezwe.
Kuvshinnikov Oleg Aleksandrovich, enenkosikazi wabeletha abafana bakhe abathathu, wonke amalungu omndeni uzama ukugxilisa uthando isiko ngokomzimba kanye nemidlalo.
Ngokusho eshicilelwe ngokusemthethweni Imininingwane imithombo, Kuvshinnikova inzuzo 2013 zaba ruble 2.5 million.
Baphinde 11 ezisunguliwe.
Njengazo zonke izikhulu isikhundla enjalo Kuvshinnikov njalo ngaphansi kuhlolwa abezindaba.
Nazi ezinye izinto kokuyekethisa eshicilelwe ngaye cindezela.
Othile, isibonelo, ekuqaleni 2014 wakwazi ukubala ukuthi umbusi nosihlalo Regional lomthetho Assembly konyaka wakwazi endizela ku-sisekelo izindiza phezu amakhilomitha ayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu for ingqikithi ruble ayizigidi ezingu 86 kusukela isabelomali. Regional Duma amasekela wachaza isidingo izindiza ezinjalo, ukucinga zimali ezingaphansi kwalelo gatsha.
Ngandlela-thile ngaphambili, Vologda Oblast Administration kwathengwa ibhizinisi Uhambo ezine okunethezeka Suv.
Nokho, zonke lezi ukusebenza futhi ababeshisekela nomona ngaphandle obubhalwe isisekelo futhi akusho luthunaze omuhle, okuye kwenziwa lo mbusi ndawo. Yazi abantu bakhe bathi uthatha ukugxekwa kahle.
Cambodia Imali: umlando, inqubo exchange, isithombe